ခိုင်မာ Friday, 06 July 2018
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှပေးအပ်သည့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်သည့်ဘာသာရပ်များမှာChinese Language Program ESifh Master Program for University of International Business and Economics (UIBE)စသည့်ဘာသာရပ်များသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါပညာသင်ဆုများသို့ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီ သော ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဝန်ထမ်းများ၊ ညီနောင်အသင်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပညာသင်ဆုများသို့လျှောက်ထားရန် စိတ်ပါဝင် စားပါက အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုWebsite:www. csc.edu. cn/laihua သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး အသင်းချုပ်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ရယူလိုပါက အသင်းချုပ်၊ အမှု ဆောင်အရာရှိချုပ်ထံလိပ်မူ၍ ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာတစ်စောင်၊ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ အသင်းဝင်ကတ်မိတ္ထူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူတို့ကိုပူးတွဲ၍ အသင်းချုပ်နှင့်ညီနောင်အသင်းများမှ အမှုဆောင်/ဝန်ထမ်း၊ အသင်းချုပ်၊ အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများမှအဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာတို့နှင့်အတူ Website တွင်ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။